FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA WHIPPET - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika whippet
Melody, whippet vehivavy 3 taona avy any Gresy
Lisitry ny alika mifangaro whippet
lalao niteraka teratany terrain omby anglisy
The Whippet dia fahitana fahitana antonony izay toa mitovy amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy Greyhound . Ny karandohany dia lava sy mahia ary somary malalaka eo anelanelan'ny sofina. Lava ny saosetra ary saika tsy mijanona, mihidy eo amin'ny orona. Mainty ny orona, manga manga na volontany mainty, maizina be ny farany ka mainty toa mainty. Mihaona ny nify amin'ny kaikitry ny hety. Ny sofina kely sy raozy dia tazonina, aforitra ary somary voarasa rehefa faly izy ireo. Ny maso miendrika oval dia miloko mainty. Mahitsy ny tongotra eo anoloana ary matevina ny tongotra, na saka na bitro toa azy. Ny rambony dia lava, manidina amin'ny teboka iray. Atao ambany izy io ary misy fiolahana kely hatrany ambony farany, mahatratra hatramin'ny farany ny hock. Esorina ny lalàma indraindray. Ny palitao fohy sy malama dia misy loko rehetra, anisan'izany ny brindle, mainty, mena, mena, fotsy sy tigra manga, na miloko miloko na mifangaro.
Ny Whippet dia manan-tsaina, velona, ​​be fitiavana, mamy ary mahaliana. Mangina sy milamina ao an-trano ity namana tena be fandavan-tena ity. Ny Whippet dia tsy tokony hampiofanina mafy mihitsy, satria mora tohina, na ara-batana na ara-tsaina. Aza hadino ny mampiditra karazana isan-karazany mandritra ny fiofanana. Ny vokatra tsara indrindra dia ho tratry ny fampidirana lalao sy hazakazaka. Ireo alika ireo dia tsara amin'ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra raha mbola tsy masiaka na maneso ny alika ny ankizy. Ny sifotra dia madio, tsy misy fofona saika, mora karakaraina ary mora ny mandeha. Mpiambina tsara izy ireo ary mety natokana ho an'ny olon-tsy fantatra. Hanenjika sy hamono saka sy biby kely hafa izy ireo raha omena fotoana mety, nefa tsara amin'ny alika hafa. Ny saka ao an-trano izay notezaina sy efa zatra no avela irery. Afaka ampiasaina hihaza izy ireo. Ny toetran'i Whippet mamy dia nahatonga azy ho alika mpiara-dia tsara. Ny Whippet no sprinter faratampony, tsy misy toa an'io, ny karazany hafa amin'ny fahaizany manafaingana ny hafainganam-pandeha ambony indrindra ary manodinkodina ary mihodina amin'ny tsy fahampiana tsy manam-paharoa. Ny sasany mety ho sarotra amin'ny famaky trano raha ny hafa kosa mamaky trano haingana. Alao antoka fa mafy orina ianao, azo antoka, tsy miovaova ity alika ity mpitarika fonosana hialana Syndrome kely alika SY olan'ny fitondran-tena . Tadidio foana, alika dia canine fa tsy olombelona . Aza hadino ny mahita ny voajanahary voajanahary ho biby.
Haavony: Lehilahy 19 - 22 santimetatra (47 - 56 cm) Vavy 18 - 21 santimetatra (44 - 54 cm)
Milanja: Males 25 - 45 pounds (11 - 21 kg)
Mora marary kibo sy olana amin'ny hoditra.
Ity karazana ity dia marefo amin'ny hatsiaka. Ny fanaovana palitao dia atoro amin'ny ririnina. Ireo alika ireo dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Ny sifotra dia milamina ao anaty trano ary hisy tokontany kely.
Ny Whippet nitazona toy ny biby dia tokony hanana fotoana matetika mihazakazaka malalaka amin'ny tany malalaka (amin'ny faritra azo antoka) ary koa a mandeha an-tongotra isan'andro amin'ny tadiny. Izy io dia mpitsangatsangana ary hanenjika sy hamono biby kely ka ilaina ny tokotanin'ny fefy.
Ny palitaon'ny Whippet dia malama, tsara ary fohy volo, dia mora volavolaina. Ny fikosehana tsy tapaka amin'ny chamois mando foana no hamirapiratan'ny palitao. Borosio amin'ny borosy mafy volo, ary mandro raha tsy ilaina. Ny palitaon'ny Whippet dia afaka amin'ny 'fofona doggie'. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Whippet dia novolavolaina tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 tamin'ny alàlan'ny fiampitana Greyhound , ny Greyhound italianina , ary alika hafa tertera hafa. Ny anarany dia avy amin'ny fitenenana hoe 'karavasy azy', izay midika hoe 'mihetsika haingana.' Ny Whippet dia mpihazakazaka miavaka amin'ny halavirana lavitra, mahatratra ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 60 kilaometatra isan'ora (60 km isan'ora), mahatratra ireo hafainganana ireo ao anatin'ny segondra! Ny filalaovana ireo alika ireo dia endrika filokana fialamboly ho an'ny saranga ambany kokoa any Angletera ary ny Whippet dia nomena anaram-bositra hoe 'ny hazakazaka an'ny olona mahantra.' Ny Whippet dia neken'ny AKC tamin'ny 1888 ary ny English Kennel Club tamin'ny 1891. Ny talenta Whippet sasany dia misy: fihazana, fahitana, fiambenana, hazakaza-tsoavaly ary familiana.
Jade the Whippet puppy amin'ny 14 herinandro
Piper the Whippet eo am-pandosirana!
Tylko Ty Androany ny Whippet, sary natolotr'i Magda Kruszewska, Polonina
Zoe the Moonlight Ypsylon, sary natolotr'i Magda Kruszewska, Polonina
Tylko Ty Androany, sary natolotry ny Magda Kruszewska, Polonina
Pipp ilay Whippet mainty sy fotsy amin'ny taona 1
Tongava ilay Whippet mipetraka eo amin'ny tetezana
Daphne the Whippet, sary nahazoana lalana avy tamin'i Lagniappe Whippets sy Norwich Terriers
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Whippet
Saripika whippet 1
Saripika whippet 2
Saripika whippet 3
sary Caucasian tendrombohitra alika
doberman / alemà mpiandry ondry Mix
firy ny greyhound italiana
afangaro amerikana bulldog sy boxer